Sakanan’i Thailandy ny Mpanao Gazety Tsy Hanatrika ny Andro Manerantanin’ny Fahalalahan-Gazety ao Finlandy · Global Voices teny Malagasy
Sakanan'i Thailandy ny Mpanao Gazety Tsy Hanatrika ny Andro Manerantanin'ny Fahalalahan-Gazety ao Finlandy
Voadika ny 01 Avrily 2016 9:46 GMT
Pravit Rojanaphruk mitazona ny kopian'ny drafitry ny lalampanorenana izay tsikerain'ny sasany hanamafy indray ny fitondran'ny miaramila ao Thailandy. Tratra manao ny mariky ny rantsa-tanana telo eto i Pravit, izay mariky ny fanoherana ampiasain'ny hery pro-demokraty ao Thailandy. Saripika: Pravit Rojanaphruk / Facebook
Notsipahin'ny fahefana miaramila Thailandey ny fangatahan'ny mpanao gazety zokiolona iray hanatrika fivoriambe miompana amin'ny Andron'ny Fahalalahan-gazety Manerantany tontosaina ao Finlandy amin'ny 3 Mey ho avy izao.
Namoaka fanavaozam-baovao maromaro ao amin'ny media sosialy tamin'ny tsy fahazoany alalana avy amin'ny governemanta handao ny firenena i Pravit Rojanaphruk, solontenan'ny Vaovao amin'ny teny anglisy ny Khaosod sady fantatra ho mpitsikera ny fitondrana miaramila. Noheverina handeha ho any Helsinki izy hanatevin-daharana ireo mpanao gazety hafa ao amin'ny lanonana ivorian'ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao karakarain'ny UNESCO.
Hatramin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny Mey 2014, tsy nitsahatra ny nitsikera ny fitondrana jadona miaramila tahailandey i Pravit. Indroa nampanantsoina izy ary notazonin'ny [mg] tafika nandritra ny andro vitsivitsy hampanaovina “fanitsiam-pombam-pisainana” ao amin'ny toby miaramila iray, saingy mbola nanohy ny tatitra fitsikerana momba ny zavatra ataon'ny fitondrana ihany izy. Tsy nisy ny fiampangana natao azy, saingy “notorian-kevitra” izy hampitsahatra ny fampielezana vaovao “manakorontan-tsaina” momba ny governemanta. Nolazaina ihany koa izy fa tsy mahazo mandao ny firenena raha tsy mahazo fankatoavana avy amin'ny fanjakana.
Norombahin'ny [mg] Tafika ny fahefana tamin'ny 2014, nandrafitra lalampanorenana vonjimaika izy ary nampanantena fa hamerina ny fahefana hoan'ny sivily aorian'ny fametrahana ny fanitsiana ao amin'ny firenena. Roa taona taty aoriana, mbola mifehy ny fahefana ihany ny tafika, henjana ny fifehezana [mg] ny media ary voarara ny fihetsiketsehana an-dalambe. Iray amin'ireo feo vitsy mbola mitsikera ny endrika jadona ataon'ny governemanta tohanan'ny miaramila hatrany i Pravit.
Eto ambany ny tsanganana Twitter navoakan'i Pravit momba ny fanapahan-kevitry ny manampahefana hitsipaka ny fangatahany hivoaka any ivelany:
Taratasy fanasana hanatrika ny fihaonamben'ny Andro Manerantanin'ny Fahalalahan-Gazety nomanin'ny UNESCO sy notsipahin'ny fitondrana miaramila.
Valiny avy amin'ny fitondrana miaramila, niantso ahy an-telefonina fotsiny hoe tsy hamela ahy handeha ho any Finlandy amin'ny fanasan'ny governemantan'i Finlandy hanamarika ny Andron'ny Fahalalahan-Gazety amin'ny volana Mey.
Raha niantso ahy ny fitondrana miaramila hilaza ny vaovao ratsy, dia nilaza izy fa “mila ahemotra” ny diako mankany Helsinki. Nanontany aho raha izany no atao hoe tsy mandeha.
Nanontany ny fitondrana miaramila ny BBC Thai nahoana aho no voarara tsy handeha ho any Finlandy hanatrika ny lanonan'ny Fahalalahan-gazety. Namaly ny fitondrana miaramila fa tsy afa-manome vaovao ry zareo.
Raha mieritreritra ny fitondrana miaramila fa hampangina ahy ny fandrarana ahy tsy hivoaka any ivelany dia diso hevitra ry zareo. Hanohy ny fikarohana fatratra sy ny fitsikerana azy ireo [aho].
Nilaza i Kirsti Westphalen, Ambasadaoron'i Finlandy miasa ao Thailandy, fa “miala tsiny” [malahelo] amin'ny fanapahan-kevitry ny governemanta Thailandey:
Malahelo amin'ny fanapahan-kevitry ny governemantan'i Thailandy handrara an'i @PravitR tsy handeha ho any Helsinki hanatrika ny Andro Manerantanin'ny Fahalalahan-Gazety ny Ambasadin'i Finlandy.